ONLF, Garabka Maxamed Cumar Cismaan oo Bilaabay Caga Juglayn iyo Hanjabaad ka Dib Heshiiskii Xabad Joojinta Ahaa ee UWSLF la Gashay Dawlada Itobiya. – Rasaasa News
May 1, 2010 Itobiya, ONLF, UWSLF, xabad
Marka ugu horaysa waxaan ku bilaabayaa in aan hambalyo u diro hogaanka Jabahada Midowga Soomaali Galbeed iyo go,aankii geesinimada lahaa ee ay qaateen, waxay shacabka Soomaalida Ogadeniya tuseen sida ay daacada uga yihiin hawsha ay u hayaan iyo sida ay uga danqanayaan dhibaatada haysata ee colaadu keentey.
Hadaan taas intaa kagga gudbo, waxaa tan iyo markii ay xabad joojinta ku dhawaaqeen UWSLF bilaabatay dacaayad iyo cay ka imaanaysay garabka Maxamed Cumar Cismaan ee ONLF, taas oo dad badani ay la yaaban yihiin, maxaa yeelay wax isugu jiray maba jirin marka maxaa ka galay haday heshiis galaan iyo hadey dagaalamaanba?
Dooda taageerayaasha garabka Admiraalka, ayaa iska hor imaanaysa. Mar waxay leeyihiin jabhadani maba jirin oo magac kaliya ayey aheyd, hadana waxey leeyihiin way isdhiibeen, mar sadaxaad ayey ku doodayaan in ay hubkii lagu dagaalami lahaa cadaw u gacan galiyeen. Qofkii u fiirsaday qoraaladooda amaba akhriyey wuxuu ka fahmayaa in ayna la qabsan karin Isbadalka socda iyo xaaladaha ku soo wajahan oo u baahan in laga firkiro sidii loo wajihi lahaa.
Mar aan maanta booqday mid ka mid ah webabka taageera Admiraalka, ayaan ka akhriyey war saxaafadeed ay soo saareen kaas oo gunaanadkiisu yahay in ay buug usameeyeen dadka aan taageersanayn ee qurbaha ku nool iyo in ay talaabo ka qaadi doonaan. Akhristow arintaasi maxey adiga kula tahey??
Anigu markii aan isu geeyey aqoonta aan u leeyahay dadka taageera Admiraalka iyo ficiladii ay horay u sameeyeen waxaa ii soo baxay, hal wax, taas oo ah AAN ISDILNO. Hadaad la yaaban tahay arinta gobalkii ka socota ee dadkii deegaanku isku dilayaan ayakoo mucaarid iyo muxaafid u kala qaybsan, mar dhow waxaad ku arki doontaa dariiqyada London iyo dhamaan magaalooyinka ku yaal reer galbeedka ee aan ku noolahay ayada oo aan mindiyo isku dilayno.
Ta kale ee soo socota, ayaa waxay tahay in shacabka Soomaalida Ogadeniya ee ku nool qurbaha ay gali doonan gumaysi cusub oo xaga fikir ka ah. Hadii aad maqli jirtay Tigree ayaa dadka u diida in siyaasad laga hadlo manta waxay taagan tahey, Ina Cumar Cismaan ayaa diiday in aad fikirkaaga dhiibato.
Maxaa dhici doona hadaan laga hortagin? Hadii aan saadaaliyo waxyaabaha laga yaabo in ay dhacaan hadaynaan si wadajir ah uga hortagin hanjabaada iyo cagajuglaynta waa sida soo socota:
· Waxaa dhici doonta in aan isdilno dal iyo dibadba.
· Waxaa dhici doonta in aan aad u kala fogaano isna nacno ilaa aan ka gaarno heer aan waxba ku heshiin wayno shisheeyana aan la kala safano.
· Waxaa dhici doonta in xataa gabdhaha la kala guursan waayo.
· Waxaa dhici doonta in qaraabonimo iyo wada dhalasho la isku soo dhaweyn waayo, laguna su’aalo yaad taageertaa inta aan lagu marti galinin.
Hadii wax garadka iyo inta caqliga u saaxiibka ahi ayna arintaa ka hortagin meel fog ayaa laga raadin doonaa.
Aragtida qoraalka Qoraaga ayaa leh, rasaas.com waa raad reeb.